Andian-tsarimihetsika vazivazy: telo manangona ho an'ny dian'ny tovovavy Seychelles faratampony
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Andian-tsarimihetsika vazivazy: telo manangona ho an'ny dian'ny tovovavy Seychelles faratampony
Vaovao Mafana • culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Dia fitsangatsanganan'ny zazavavy Seychelles
Ny adidy isan'andro dia tsy vitan'ny faneriterena fa koa ny fanalefahana sy ny fitokana-monina. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fitsangatsanganana.
Andao hiaraka amin'ireto vehivavy 4 ireto rehefa manatanteraka sangan'isan'ny siny sy mankafy fitsangatsanganana zazavavy any Seychelles tsara tarehy izy ireo.
Ny fitsangantsanganana amin'ny nosy dia tsy maintsy faritana ao amin'ity vondronosy mahafinaritra sy mahatalanjona ity.
Ary fitsangatsanganana inona no ho vita raha tsy misy sakafo mamelombelona sy matsiro - izay tsy mila mamorona tena?
Inga, Sheila, Ifat, ary Ela dia naka sasatra tamin'ny fiainany nampitebiteby, nitsambikina tamin'ny fiaramanidina nankany Seychelles hiaina, lavitra ny vahoaka marobe, inona no mety ho fitsangatsanganan'ny tovovavy tsara indrindra nananan'izy ireo!
Ny quartet dia nifantoka tamin'ny zava-niainan'izy ireo momba ny fitsangantsanganana amin'ny nosy, mifantoka amin'ny nosy Mahé, Praslin ary Ste. Anne. Niaina am-pifaliana izy ireo tamin'ny fitsidihana ny nosy lehibe Mahé, fizahana sy fakana sary manodidina ireo toerana manan-tantara sy kolontsaina malaza manodidina ny renivohitra kely Victoria. Nankafy ny fomba fijery nahavariana indrindra avy amin'ny Mission Lodge izy ireo, tsy maty natao sary tamin'ny sary hosodoko botanista anglisy Marianne North, izay nijery ny atsimo namakivaky an'i Mahé, ary nitady tamim-pahalianana ilay vakoka UNESCO World Heritage an'ny Seychelles tao Praslin ilay Vallée de Mai, fonenan'ilay coco mahatalanjona. de-mer nut, ary milentika amin'ny masoandro tropikaly amin'ireo morontsiraka malefaka vovoka manodidina ireo nosy.
Soso-kevitra: Ny nosin'i Seychelles ahitana nosy 115, samy manana ny mampiavaka azy manokana mahafinaritra sy tsy manam-paharoa, ary tsy te ho diso anjara na dia iray akory aza ianao rehefa mandehandeha manerana ny nosy amin'ny fiara karamaina na minibus miaraka amin'ny mpitari-dalana izay mampiseho aminao sy ireo sakaizanao ny tsy maintsy mahita teboka Island hopping dia tsy maintsy faritana, na amin'ny rivotra na sambo; amboary ny dianao amin'ny alàlan'ny mpandraharaha iray eto an-toerana manana fitsidihana mitokana.
Manoro hevitra ihany koa izahay ny andro fitsangatsanganan'ny tovovavy iray, manararaotra ny morontsiraka manintona izay lisitra tampon'ny lisitra 'tonga lafatra indrindra eto an-tany', toa an'i Anse Lazio ao amin'ny Nosy Praslin na koa Anse Source D'Argent an'ny La Digue, izay azo antoka fa hahavita izany. ny fianakavianao sy ny namanao maintso amin'ny fialonana. Ho an'ireo tia natiora sy manao fanatanjahan-tena sasany, dia atolotray ireo làlana tsara manodidina ny nosy; misokatra indrindra amin'ireo vistas miavaka - ary ireo mpitari-dalana mpizahatany manana fahazoan-dàlana dia mahay amin'ny lore eo an-toerana. Fitsangatsanganana an-tsambo mankany Ste. Anne Marine Park mba hankafy ny karazan-dranomasina mahagaga dia tsy maintsy atao; mitsangatsangana amin'ireo toeram-pialofana nosy toa an'i Curieuse na Cousin mba hiroboka amina fomba fitahirizana fahombiazana. Ho an'ny traikefa tsy hay hadinoina dia mamandria fijanonana maharitra kokoa ao amin'ny Bird Island, izay toerana tokana misy olona ahitanao ny terno sooty no mijanona eo amin'ny akaniny eo anelanelan'ny Mey sy Oktobra, ary an-tapitrisany amin'izy ireo no tsy mety diso!
Manararaotra ny ankamaroan'izy ireo nitsoaka hamerenana ny batterie, nifantoka tamin'ny dian'ny famerenana aina ireo tovovavy raha tany Seychelles; miala sasatra amoron-dranomasina sy amoron-drano no ampahany tsara indrindra tamin'ny fotoam-pahavitrihan'izy ireo.
Ny toro-hevitray: Seychelles dia manana spaoro hafakely; makà fotoana hisafidianana izay mety aminao indrindra! Rehefa dinihina tokoa, ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny fotoanan'ny zazavavy amin'ny fialantsasatra dia ny mandany fotoana, tsy misy tsara noho ny iray andro any amin'ny spa miaraka amin'ireo olona tianao indrindra. Ny fikosehana amin'ny vokatra novokarina hafahafa avy any an-toerana, nofonosina esory voajanahary toy ny citronella, voanio na koa lavanila dia azo antoka fa hanamaivana ny havizanana sy ny fihenan'ny fomba fiainana maoderina tsy miato. Makà fotoana kely hiarahan'ny zazavavinao amin'ny dia lavitra sy fanovana ny saina, vatana ary fanahy.
Ankafizo ny tsiro krôla
Nandritra ireo nosy ireo vehivavy israeliana 4 dia nanao dia lavitra nahandro nahagaga, nanintona ny tsiron'izy ireo tamin'ny tsiro miavaka amin'ny sakafo kreôla, nalaza noho ny fifangaroan'ny zava-maniry sy zava-manitra tonga lafatra.
Soso-kevitray: Azo inoana fa iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ny dia nataonao, ny nahandro kreôla dia tena kolontsaina manalefaka nipoitra avy amin'ny fifangaroan'ny sakafo eropeana miaraka amin'ny fitaoman'ireo mpifindra monina avy any India sy Sina. Eto ianao dia hankafy ny kariera mahafinaritra indrindra, trondro voaendy mahafinaritra avy any an-dranomasina, ary gratins vita amin'ny hazandranomasina vao tratra. Ankoatry ny fisakafoanana tsara dia tsy maintsy mitsangatsangana any an-toerana ianao amin'ny alàlan'ny Seychellois, mba hahafahanao mankafy ihany koa ny sakafo nentin-drazana, amin'ny vidiny manintona, ary ny bar sy ny barany eo amoron-dranomasina ho an'ny kokota tsara indrindra amin'ny fiainanao!